Huawei Fit, mgbaaka ọrụ aka ọhụrụ na ihuenyo monochrome | Akụkọ akụrụngwa
Huawei Fit, mgbaaka ọrụ ọhụụ na ihuenyo monochrome
Juan Luis Arboledas | | Ngwa
Huawei ka kwuputara na a ga-ebuputa ihe ha jiri aka ha mee baptism FitOlee ihe enyemaka a smart nche karịsịa egosipụtara maka ọrụ ahụike Ọ na-apụ apụ maka nlezianya aesthetics ya, akara okirikiri ya na ọkachasị ihuenyo mmetụ monochrome nke, na usoro a kapịrị ọnụ, ga-adị mgbe niile. Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, Huawei Fit ejirila ihe mmetụta nke ọ nwere ike ịgụta usoro, soro ụra na ọbụlagodi na-enyocha obi onye ọrụ mgbe ọ na-egosipụta.
Banyere arụmọrụ a kapịrị ọnụ, dị ka akọwara na pịa pịa wepụtara maka oge ahụ, Fit ahụ nwere ike ịchọpụta ma ị na-ehi ụra, na-eje ije ma ọ bụ na-agba ọsọ iji tụọ akụkụ ndị ọzọ n'ụzọ ziri ezi dịka usoro, njem dị anya, oriri kalori ma ọ bụ oge ụra. Dịka nkọwa, dabere na ụdị onye ọrụ data a ga-amasị gị karịa ma ọ bụ obere, gwa gị na ngwaọrụ a enweghị GPS Kwurula ma enwere ike ịmekọrịta ya na ngwa Huawei Wear dị ugbu a na iOS na gam akporo. N'aka nke ọzọ, na mgbakwunye na ịnwe ike ịlele akụkụ niile a tụlere n'elu, ekwesiri ịmara na Huawei Fit na-egosipụtakwa ihe ngosi maka oku na ozi na-abata.
Huawei Fit adịlarị ire ere $ 129,99 na United States.
Dịka ị pụrụ ịhụ na foto abụọ gbasara na ọkwa a, ọdịdị nke ngwaọrụ ahụ dị egwu, dị nnọọ ka ihe Pebble na-enye na Oge Gburugburu ọkọnọ afọ gara aga, nke a bụ myirịta na photomontages adịghị egbu oge ịpụta na ụgbụ ebe, ịtụkwasị foto nke otu na-esote nke Huawei a siri ike ịchọta ọdịiche dị iche.
N'oge a, enwere m ike ịgwa gị na batrị ahụ dị mma ga-adị ole na ole ụbọchị isii ma ọ bụrụ na anyị nwere nkịtị ojiji na ruo ụbọchị 30 na nọrọ na njikere mgbe ngwaọrụ odori na-ewe ihe na-erughị awa abụọ. Y’oburu n’ichoo inweta otu nke United States, oghaala ire na ego nke 129,99 dollar na ọlaọcha ma ọ bụ isi awọ gwụchaa na oji, oroma ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ nwere ike dochie ya na eriri 18mm ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Huawei Fit, mgbaaka ọrụ ọhụụ na ihuenyo monochrome
Mgbaaka na okirikiri? A na-akpọ ha elekere?
Site na mgbaaka nwere ịkpọ oku m na-ekwu na isi ihe ahụ bụ Huawei Fit bụ mgbaaka na-agụkọ, ọ bụghị igwe elekere ma ọ bụ smartwach iji.
Zaghachi Juan Luis Arboledas
Apple nchọpụta ikike ya nke mebere anya ya
Njem ịzara gafere, WiFi ruru ụgbọ oloko RENFE